Ngokombono womthengisi, ngikholelwa empeleni ukuthi ukungathandwa kwabathelisi esikubona kunamandla amaningi kunokuthola iqiniso langempela. Ngenkathi iqiniso elibonakalayo lizosivumela ukuthi sizwe okuhlangenwe nakho okungelona iqiniso, iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona lizothuthukisa futhi lihlanganyele nomhlaba esihlala kuwo njengamanje. Sabelane ngaphambilini kanjani I-AR ingathinta ukumaketha, kodwa angikholwa ukuthi sichaze ngokuphelele iqiniso elingathandwa kwabathelisi esikubona futhi sanikeza nezibonelo.
Esinye isibonelo emakethe isici sikaYelp ku- uhlelo lokusebenza lweselula kubizwe uMonocle. Uma ulanda uhlelo lokusebenza bese uvula imenyu engaphezulu, uzothola inketho ebizwa ngokuthi Monocle. I-Open Monocle ne-Yelp zizosebenzisa indawo okuyo, ukuma kwefoni yakho, nekhamera yakho ukumboza idatha yazo ngokubukeka ngokubuka kwekhamera. Kuhle impela - ngiyamangala ukuthi abakhulumi ngayo kaningi.
Isibonakaliso yethule izibuko ezisebenzisanayo zezitolo ezidayiswayo lapho umsebenzisi angabona khona ukuthi bazobukeka kanjani ngezimonyo, izinwele noma izinto zesikhumba ezifakiwe. sephora ukhiphe ubuchwepheshe babo ngohlelo lweselula.